Wasiirka Arimaha dibada ee Gumaysiga Itoobiya Tedros Adhanom oo amar siiyay kuwa u adeega | Voice Of Somalia
Posted on January 10, 2016 by Voice Of Somalia Image
Warar hoose oo la helay ayaa sheegaya amar ka soo baxay Wasiirka Gumaysiga Itoobiya Tedros Adhanom in uu madax weynahay Somalia Hassan Sheikh Mohamuud ku armay in uu yimaado shirka lagu wado in uu ka furmaya Magaalada Kismaayo kaas oo markii hore lagu waday in uu maanta furmo balse dib loo dhigay arimo jira awgeed waxaana lagu wadaa in uu furmo 12 bishan oo ah maalinta Tadaalada ah.
Shirkan oo ay ku kala aragti duwan yihiin madaxda Somaliya oo kuwa badan ka biya diidsanayeen in ay tagaan oo uu uga horeeyo madaxweyna Hassan Sheikh ayaa lasheegaya in uu amar ka soo baxay Wasiirka Arimaha dibada ee Itoobiya Tedros Adhanom isaga oo sheegay in ay qasab tahay in uu shirka yimadaan, Hassan Sheikh, Omar Abdirashiid, Guleed, & Shariif Hassan wuxuuna sheegay Tedros in uu madaxweynaha iyo madaxada kale yimadaan halkaas oo uu ku arko.
Warar ka agdhow madaxdaas ayaa sheegaya in ay aqbaleen diyaarna u yihiin in ay shirka yimadaan oo ay ka soo qaybgalayaan ayaga oo liqay dhamaan wixii ay markii hore ku fikirayeen qasabna ku tahay in ay madashas yimadaan.
Arintan oo ah arin cusub ayaa cadayn u ah in ay Itoobiyan xukunto dalka Somaliya dhamaana madaxada Somaliyana ku shaqeyaan amarka Itoobiya balse hadda ka hor la dadi jiray oo la qarin jiray maantase si dhab ah u muuqato.
Waxaan isha ku hayna siyaasada dadan ee Gumaysiga Itoobiya ayaan soo bandhigi donaa qorshaha Itoobiya ee ku aadan Somaliya ee kala soco wararkanaga dambe insha allaah.